ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres က Nobel ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအတွင်း မိန့်ခွန်းပြော
COVID- 19 ကပ်ရောဂါဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲမှုတွေ စတင်ကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ် Antonio Guterres က သောကြာနေ့မှာ ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် နော်ဝေနိုင်ငံ Oslo က နိုဘဲလ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ပေးပွဲ အခမ်းအနားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု အဖြစ် ဒီကပ်ရောဂါရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ ရေရှည်အကျိုးဆက်တွေအကြောင်း အွန်လိုင်းဖိုရမ် ဆွေးနွေးပွဲမှာ အတွင်းရေးမှုးချုပ်က အခုလို ပြောကြားလိုက်တာပါ။
"ကမ္ဘာတလွှား ဆင်းရဲတွင်းနက်မှု ဆိုးဆိ်ုးဝါးဝါး တိုးလာပြီး အငတ်ဘေး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ကြုံနေရသလို အခုလို ခံစားနေရမှုတွေရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ရေရှည်အတွက် အင်အားချိနဲ့မှုတွေ၊ မညီမျှမှုတွေ၊ မတရားမှုတွေ ဖြစ်လာစေကြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဒဏ်ခံရချိန်မှာ ဒါတွေကိ မြင်လာရတာဖြစ်ပြီး ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအတွက် အသစ်တဖန် ပြောင်းလဲမှုတွေ ပြန်စကြဖို့ " တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီကပ်ရောဂါကြောင့် လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာ သိပ်ကို ကြီးမားသလို ဆက်ပြီးလည်း တိုးလာနေကြောင်းနဲ့. ဒီကပ်ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးရလာတာကလည်း ဒါကို ကျော်လွှား နိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်း ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘဲလ်ဆုရ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ် WFP က အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ David Beasley ကလည်း လာမယ့် ၂၀၂၁ မှာ ခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ရဖို့ ရှိတဲ့အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ အချိန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ကိုဗဈအလှနျမှာ ကမ်ဘာကွီးကို အသဈတဖနျပွောငျးလဲဖို့ ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျ တိုကျတှနျး
COVID- 19 ကပျရောဂါဒဏျခံခဲ့ရတဲ့နောကျပိုငျးမှာ အဆငျမပွမှေုတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ အသဈတဖနျပွောငျးလဲမှုတှေ စတငျကွဖို့ ကုလသမဂ်ဂအတှငျးရေးမှုးခြုပျ Antonio Guterres က သောကွာနမှေ့ာ ပနျကွားလိုကျပါတယျ။
ဒီဇငျဘာလ ၁၁ ရကျ နျောဝနေိုငျငံ Oslo က နိုဘဲလျငွိမျးခမျြးရေးဆု ပေးပှဲ အခမျးအနားရဲ့ အစိတျအပိုငျးတခု အဖွဈ ဒီကပျရောဂါရဲ့ ရိုကျခတျမှုနဲ့ ရရှေညျအကြိုးဆကျတှအေကွောငျး အှနျလိုငျးဖိုရမျ ဆှေးနှေးပှဲမှာ အတှငျးရေးမှုးခြုပျက အခုလို ပွောကွားလိုကျတာပါ။
"ကမ်ဘာတလှား ဆငျးရဲတှငျးနကျမှု ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တိုးလာပွီး အငတျဘေး ခွိမျးခွောကျမှုတှေ ကွုံနရေသလို အခုလို ခံစားနရေမှုတှရေဲ့ ရိုကျခတျမှုကွောငျ့ ရရှေညျအတှကျ အငျအားခြိနဲ့မှုတှေ၊ မညီမြှမှုတှေ၊ မတရားမှုတှေ ဖွဈလာစကွေောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကပျရောဂါဒဏျခံရခြိနျမှာ ဒါတှကေိ မွငျလာရတာဖွဈပွီး ဒီလို ဖွဈနတေဲ့ ကမ်ဘာကွီးအတှကျ အသဈတဖနျ ပွောငျးလဲမှုတှေ ပွနျစကွဖို့ " တိုကျတှနျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီကပျရောဂါကွောငျ့ လူမှုရေးနဲ့ စီးပှါးရေးဆိုငျရာ ရိုကျခတျမှုတှဟော သိပျကို ကွီးမားသလို ဆကျပွီးလညျး တိုးလာနကွေောငျးနဲ့. ဒီကပျရောဂါအတှကျ ကာကှယျဆေးရလာတာကလညျး ဒါကို ကြျောလှား နိုငျမှာ မဟုတျတဲ့အတှကျ နိုငျငံတကာက ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွဖို့လညျး ပနျကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒီနှဈအတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးနိုဘဲလျဆုရ ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာ အစီအစဉျ WFP က အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ David Beasley ကလညျး လာမယျ့ ၂၀၂၁ မှာ ခကျခကျခဲခဲရုနျးကနျရဖို့ ရှိတဲ့အတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျကွဖို့ အခြိနျ ဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။